Khadadka dusha sare ee Manifold GIS - Geofumadas
Disember, 2009 GIS kala cayncayn ah, topografia
Tijaabinta waxa Manifold GIS ku sameeyo moodooyinka dhijitaalka ah, waxaan ogaadey in toy-ga uu sameynayo wax ka badan wixii aan ilaa hadda aragnay ee maareynta meelaha fudud. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa tusaalaha aan ku abuurnay layliga waddooyinka leh 3D Madaniga.
Soo qaado qaab sawireed
Manifold-kan waa dameer xoog badan, waxaad ka soo qaadan kartaa qaababka guud ee keydiya xogta dusha sare, sida ESRI, ENVI, IDRISI, ERDAS, iwm. Sidoo kale xogta ku jirta qaababka aasaasiga ah sida dbf, csv, txt.
Xaaladdan oo kale, waxaan rabaa in aan soo dejiyo a .dem la abuuray AutoDesk Civil 3D; waayo, waan samaynayaa.
Faylka> soo dejiso> dusha sare
Iyo voila, waxay abuurtaa nooc faallooyin ah oo leh sifooyinka faylka asalka ah, sida odoroska, barnaamijka lagu abuuray, iwm. Haddii ay dhacdo in la isku duwo feylasha, codso sida ay u kala horreeyaan iyo nooca tirada lambarro ah.
Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso xogta qayb ka mid ah, si aad ugu beddesho dusha sare, waxaad sameyneysaa oo kaliya nuqul> ku dhaji dusha sare
Si loo abuuro khadadka xuduudaha, waxaa la sameeyaa:
Dusha sare> wareegyada
Oo halkan waxaad dooran kartaa goolal shakhsiyeed, ama mid koror ah, kan ugu horreeya ayaa la dhigayaa iyo inta lagu daray. Xaaladdan oo kale, waxaan go'aansanayaa 191 iyo kordhinta 1.
Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad dhigto khadadka wareegga ama sidoo kale aagga u dhexeeya, isla markiiba waxay u muuqdaan kuwo midab leh mawduuca caadiga ah ee meelaha sare. Tan waxaa loo abuuray sidii nooc ka kooban sawir.
Samee aragtida 3D
Si arrintan loo sameeyo, dusha sare waxaa la abuuraa qof hoose oo loo yaqaan 'subcomitors' dhul, Tani waxay u muuqan kartaa aragtida 3D, oo leh badhanka saxda ah ee aad dooran karto haddii aad rabto dahaadhaa lakabyada kale, dusha sare ee daadadka, dusha sare, Wireframe iyo sare u qaadka sare.
Si aad u gelisid faahfaahin, waxaa loo abuuray sida haddii qayb ka mid ah la sameeyo, la doorto sare u qaadidda. Waxay codsataa dusha sare ee ku tiirsanaanta ka dibna khadka ayaa wax laga beddeli karaa iyadoo lagu darayo geesaha.
Ma aha wax xun, haddii aan tixgelinno in tani ay qayb ka tahay kordhinta Qalabyada DhulkaSida qalab kasta oo GIS ah, jaangooyuhu waa raaxo, fudud in la abuuro dusha sare, laakiin wuu ku yaryahay xagga ficil ahaanta iyo howlaha kale natiijooyinka. Uguyaraan abuurista aragti isometric leh xorriyad weyn ayaa igu qaadatay waqti dheer, waxay sidoo kale saameyneysaa in walxaha ay soo saarto (curves, basins, meelaha udhaxeeya curves) aysan aheyn astaamaha lakabka, marka markaad cusbooneysiineyso tusaalaha waa inaad abuurtaa markale.
Post Previous" Hore Isku aadka FIFA ayaa yimid
Post Next Guji, guji, gujiNext »